Accueil > Gazetin'ny nosy > Filan-kevitra ny minisitra : Tsy itondrana firenena ny fampitam-baovao am-bava
Filan-kevitra ny minisitra : Tsy itondrana firenena ny fampitam-baovao am-bava
Nahagaga ny fahenoana isan’andro isaka ny mivory ny ao amin’ny governemanta ao na ny filan-kevitra ny minisitra fa voalaza matetika ny hoe “fampitam-baovao am-bava” na “ communiqué verbal” avy amin’ny ministera izatsy na zaroa. Toa ity fomba vaovao ity no nalaza hatramin’ny fotoanan’ny tetezamita iny ka notohizan’ingahy Hery Rajaonarimampianina ary mbola ampiasan’ny governemantan’ingahy Ntsay Christian sy Andry Nirina Rajoelina izao indray. Ekena dia ekena ny fampahalalana ny vaovao am- bava, ary ilaina ho fantatra ny olona koa izany saingy tsy misy fanjakana mitondra ka tsy atao araka ny lalàna ny fitantanana azy sy ny fanapahan-kevitra raisina amin’izany. Sarotra dia sarotra tokoa no hampiharina ny “communiqué verbal” na ny fampitam-baovao am-bava ho any amin’ny sampan-draharaha rehetra. Sa ve dia ho raisina hoe “araka ny fampitana vaovao am-bava tao amin’ny filan-kevitra ny minisitra na ny governemanta dia ho tanterahany izao?”
Iaraha-mahalala fa ny fanapahan-kevitra raisin’ny sampan-draharaha isan-karazany any amin’ny departemanta any dia tsy maintsy lalàna avokoa ary mandeha araka ny fenitrin’ny fitantanan-draharaham-panjakana. Nanomboka tamin’ny andron’ny tetezamita ny taona 2009 ka hatramin’izao dia nahazo laka ny fampitam-baovao am-bava ity teto Madagasikara. Misy aza dia ity “communiqué verbal” na fampitam-baovao am-bava ity no atao ao anatin’ny filan-kevitra ny minisitra na ny governemanta iray dia vita ny fivoriana. Ny antony dia satria tsy nahavita ny asany tokony hotanterahany ilay minisitra. Toa ny olona mitatasy sy manao kalizy fotsiny ve sanatria ny filan-kevitra ny minisitra ka “fampitam-baovao am-bava no horesahina?”
Inona marina moa no “valeur juridique” na “valeur administrative” ny fampitam-baovao am-bava na ny “communiqué verbal”? Maro mantsy ny olona tsy mahalala marina izay tiana ahatongavana amin’izany satria fitantanana raharaham-pirenena no atao, ka ny fitantanana raharaham-pirenena dia tsy maintsy ny fanarahana ny lalàna ihany.
Sa ve hotantanina amin’ny tenin’ny filoham-pirenena sy ny ministra ny firenena fa tsy araka ny lalàna intsony izay fenitra ny fitantanan-draharaham-panjakana ary ny fomba fanao hatramin’izay ?